As of Sat, 30 May, 2020 00:35
सत्तारुढ दलकै नेता निराश
मंगलबार संघीय संसद्मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटबाट सत्तापक्षकै नेता निराश बनेका छन् ।
सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ :डा कोइराला
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले संघीय संसदमा पार्टीले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेश–एकमा ‘जनतासँग प्रहरी अभियान’ सुरु
प्रदेश–१ सरकारले सयदिने कार्ययोजनाअन्तर्गत सोमबारदेखि जनतासँग प्रहरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सरकार गठनलगत्तै घोषणा गरेको सयदिने कार्यक्रमअन्तर्गत जनतासँग प्रहरी कार्यक्रम सय दिन बितेपछि सुरु गरेको हो । कार्यक्रम घोषणा गरेको सय दिन बितिसकेको छ ।
टुट्ला त प्रदेश–दुईको गठबन्धन ?
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशभर आफ्नो सरकार बनाउने रणनीतिअन्तर्गत संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा सामेल गराउने सम्झौता गरेको छ । संविधान संशोधनको सुनिश्चितता खोज्दै आएको संघीय समाजवादी फोरमले सत्तारूढ नेकपासँग सोमबार दुई बुँदे सम्झौता गरी सत्तारोहणको बाटो स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारको गतिविधि हेरेर सहयोग गर्छौं : गगन
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पाँच वर्षसम्म अहिलेको सरकारको गतिविधि हेरेर सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
नेकपाद्वारा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश २ को सरकारलाई परेको छ । नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेश नम्बर २ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै आइतबार संसद अवरुद्ध छ ।
‘गेट आउट’ भन्दैमा नेतृत्व नछाड्ने देउवाको उद्घोष
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कसैले ‘गेट आउट’ भन्दैमा आफूले पार्टीको नेतृत्व नछोड्ने प्रष्ट पारेका छन् । नेपाल प्रेस युनियनको २७औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले निर्वाचित सभापतिलाई कसैले ‘गेट आउट’ भन्न नमिल्ने बताए ।
सभामुखमा महन्थ ठाकुरलाई प्रस्ताव
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई प्रतिनिधिसभा सभामुखको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि विघटित नेकपा (एमाले)ले संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन पहल गरेको थियो ।
कांग्रेस संघीय संरचनामा गएन :गुरुङ
नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङले मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेस अझै पुरानै संरचनाअनुसार चलेकोमा दुखेसोे पोखेका छन् । उनले तत्काल पार्टीको विधान संशोधन गरी संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।
सरकार सर्वसत्तावादी व्यवस्था कायम गर्न उन्मुख : थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारले विपक्षी दलप्रति असहिष्णु भई सर्वसत्तावादी व्यवस्था कायम गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।
भ्रष्टाचार हुन नदिन अध्यक्षद्वयको निर्देशन
भ्रष्टाचार नगर्न र हुन नदिन अध्यक्षद्वयको निर्देशन कारोबार संवाददाता काठमाडौं, १० जेठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई भ्रष्टाचार नगर्न र हुन पनि नदिन निर्देशन दिएका छन् ।
राप्रपा केन्द्रीय परिषद् बैठक सम्पन्न
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय परिषद्को तीन दिने बैठक बुधबार सम्पन्न भएको छ । बैठकले राजनीतिक तथा वैचारिक कार्यदिशा, संगठनात्मक सुदृढीकरण र प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेको छ ।
नीतिबिनाको कार्यक्रममात्र : देउवा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि कडा आलोचना गरेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा जारी सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा कांग्रेसका नेताहरूले ‘नीति नभएको कार्यक्रम’ मात्र भएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।
केन्द्रीय समिति गठनमा तत्कालिन माओवादीको चरम असन्तुष्टि
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समिति गठनबारे पूर्व माओवादी केन्द्रमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ४४१ केन्द्रीय सदस्यको नामावलीमा नेताहरूले आफन्त र नातेदारलाई समावेश गरेको भन्दै तल्लो तहका नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
मुद्दा खारेज नभएसम्म फोरम र राजपा सरकारमा नजाने
मधेश आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता नभएसम्म संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुबै सरकारमा नजाने भएका छन् ।